I-Queue-it: Yongeza iGumbi lokulinda elibonakalayo kwiWebhusayithi yakho ukuze ulawule ukuSasa kweZithuthi eziPhezulu | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Februwari 4, 2022 NgoLwesihlanu, Februwari 4, 2022 Douglas Karr
Asikwazi ukuthatha iiodolo… indawo iphantsi ngenxa yokuba iya ixinzelelwa yitrafikhi.
La ayingomagama ofuna ukuwava ukuba ukhe waba yinxalenye yokusungulwa kwemveliso, ukuthengiswa kwe-intanethi, okanye ukuthengisa amatikiti kumsitho... inani lezizathu:
Unxunguphalo lwabatyeleli -Akukho nto ikhathaza njengokubetha impazamo yeskripthi rhoqo kwindawo yakho. Undwendwe olukhathazekileyo ludla ngokugqabhuka kwaye alubuyeli… okukhokelela ekubetheni ibhrendi yakho kwaye ulahlekelwe yingeniso.
Imfuno yeNkonzo yoMthengi -Iindwendwe ezidanileyo zikhokelela kwii-imeyile ezinomsindo kunye neefowuni, ukurhafisa iqela lakho langaphakathi lenkonzo yabathengi.
Imfuno yeBot embi -Kukho inani labadlali ababi apho izixhobo zeskripthi zokuthatha ithuba kwezi ziganeko. Umzekelo ngama-scalpers afuna ukuthenga amatikiti amaninzi ekonsathi edumileyo. Iibhothi zinokungcwaba indawo yakho kwaye zicime i-inventri yakho.
Ubulungisa boMthengi -Ukuba indawo yakho iphezulu kwaye iphantsi, iindwendwe zakho zokuqala zingakwazi ukuguqula kwaye iindwendwe kamva ziyakwazi. Oku, kwakhona, kunokulonakalisa isidima sophawu lwakho.
Kukho izisombululo ezinobungozi ezithi iinkampani ezininzi zisebenzise ukuzama ukwamkela ii-surges kunye ne-spikes kwimfuno yendawo yakho. Nangona kunjalo, ezi zinto zinokubiza kwaye zingakwazi ukuphendula ngokukhawuleza. Ngokufanelekileyo, isisombululo kukuba emgqeni iindwendwe zakho. Oko kukuthi, iindwendwe zithunyelwa kwigumbi lokulinda elibonakalayo kwisiza sangaphandle de zikwazi
Yintoni Igumbi lokulinda elibonakalayo?
Ngokunyuka kwetrafikhi ephezulu, abathengi babekwe emgceni banokufikelela kwiwebhusayithi yakho ngegumbi lokulinda ngendlela enobulungisa, yokuqala-yokuqala. Igumbi lokulinda elibonakalayo libonelela ngamava afanelekileyo omsebenzisi, igcina ingqibelelo yophawu lwakho, yenza ukuba isantya se-bots sibe buthathaka kunye nenzuzo yevolumu. Uyaqinisekisa ukuba iimveliso zakho okanye amatikiti aphelela ezandleni zabathengi kunye nabalandeli bokwenyani.
Yifake emgceni ngumphuhlisi okhokelayo weenkonzo zegumbi lokulinda ukulawula iwebhusayithi kunye ne-app traffic surges ngokulayisha iindwendwe kwigumbi lokulinda. Iqonga layo elinamandla le-SaaS lenza ukuba amashishini kunye noorhulumente kwihlabathi liphela bagcine iinkqubo zabo kwi-intanethi kunye neendwendwe zinolwazi, zithatha iintengiso eziphambili kunye nomsebenzi we-intanethi ngezona ntsuku zibaluleke kakhulu zoshishino.
Queue-it ikunika ulawulo phezu kweencopho zetrafikhi ezikwi-intanethi ezigrogrisa ukonakaliswa kwendawo yakho. Ukubeka iindwendwe kwindawo yokuqala, kwigumbi lokulinda lokuqala ligcina iwebhusayithi yakho isebenza kakuhle xa ibaluleke kakhulu.
Yifake emgceni ikhokelwa luphando lwamva nje lwesayikholoji yengqondo ukugcina iindwendwe zakho zisemgceni kwaye uzinike amava akhuthazayo. Ngonxibelelwano lwexesha lokwenyani, ixesha lokulinda elibonisiweyo, izaziso ze-imeyile, amagumbi okulinda anokwenziwa ngokwezifiso, kunye nenkqubo yokuqala-yokuqala unika abathengi bakho ixesha lokulinda, elicacisiweyo, elinesiphelo kunye nokulunga.
Kukho iindlela ezingalunganga kunye nezingenamthetho zokujongana nokugcwala kwe-intanethi. Nge-Queue-it, uqinisekisa amava afanelekileyo omsebenzisi kwaye ugcine intembeko yophawu lwakho. Abathengi bangena kwiwebhusayithi yakho ngendlela efanelekileyo, yokuqala-yokuqala-ngaphandle.
Ukusetyenziswa kwe-Queue-kuqinisekise ubulungisa be-intanethi ngexesha lemikhankaso yemfuno ephezulu kunye nemisebenzi yeebhiliyoni zabasebenzisi kwihlabathi jikelele. Zama i-Queue-ligumbi lokulinda elibonakalayo kwaye ujonge into enokuyenza kwiwebhusayithi yakho egcwele kakhulu okanye iapp.
Bhalisela uvavanyo lwasimahla ngeQueue-it
tags: ukuthengiswa kwe-intanethiemgceniukuthengiswa kwetikitii-traffic spikeukunyuka kwetrafikhiumgca wenyaniigumbi lokulinda elibonakalayoumgca wewebhusayithiigumbi lokulinda iwebhusayithi
I-ReferralCandy: I-Ecommerce Referral Platform eGqibeleleyo onokuthi uyiqalise ngeMizuzu